Ukulinganiswa kweTV: I-NFL 'ngoMvulo ebusuku ngeBhola ekhatywayo' kwi-ESPN Phantsi ukusukela nge2016 - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa 'Ukuvulwa kweBhola ekhatywayo yangoMvulo ebusuku ukusuka kwi2016
'Ukuvulwa kweBhola ekhatywayo yangoMvulo ebusuku ukusuka kwi2016
Ukulinganiswa 'kweBhola yoMvulo ebusuku' kwehlile ukusuka kwi-2016.UJonathan Daniel / Getty Izithombe
Bekungomnye unyaka ophantsi kwizilinganiso zeNFL. Iligi ye-juic primetime matchups ithi nkxu ebhodini, ingakumbi ii-NBC NgeCawa ebusuku . Ngelixa i-ESPN NgoMvulo ebusuku ngeBhola ekhatywayo wabona iqhuma kumdlalo wokugqibela wangokuhlwa phakathi kweDetroit Lions kunye neAaron Rodger-ngaphantsi kweGreen Bay Packers, ukubonwa kwayo kusaza kwehla kunogxa wayo we2016.
Umhla wokugqibela Iingxelo zokuba u-Detroit u-30-17 uloyiso phezolo ufumene amanqaku e-7.6 kwiziphumo zeemarike ze-NFL kunye ne-ESPN. Oko kuphawula ukukhula kweepesenti ezi-6 xa kuthelekiswa nomdlalo we-Okthobha wama-30 phakathi kweeNtloko zeSixeko saseKansas kunye neDenver Broncos, eyafumana amanqaku e-3.5 phakathi kwe-18-49 yedemo enomthengisi kunye nezigidi eziyi-10.42 zababukeli. Kukwenyuka kakhulu kweepesenti ezingama-25 xa kuthelekiswa I-MNF 'Ixesha eliphantsi lonyaka we-16 ka-Okthobha umdlalo phakathi kweTennessee Titans kunye ne-Indianapolis Colts. Ke ngelixa umdlalo uphawula into encinci ye-2017, awuthelekisi kakuhle I-MNF 'S Iveki 9 ukuphuma kuka-2016.
Loo matchup phakathi kweSeattle Seahawks kunye neBuffalo Bills yathatha iipesenti ezi-3 zababukeli ngoNovemba 7, ngaphandle kokufika ngolwenyulo lonyulo luka-2016. Ngokubanzi, umdlalo uzuze amanqaku e-3.8 nge-11.20 yezigidi zababukeli, kwivenkile nganye.
Ukujonga umfanekiso omkhulu, i-ESPN's 2017 I-MNF iminikelo yehle ngeepesenti ezi-3 xa kuthelekiswa no-2016. Ngelixa uMhobe weSizwe uqhanqalazo lunokudlala indima enkulu kukwehla kwamanqaku, umgangatho wokudlala nawo unento yokwenza nawo. Ngenxa yokuqhuma okungaqhelekanga kokulimala kwabadlali beemarike ngeli xesha lonyaka-uRodgers, uDeshaun Watson, u-Odell Beckham Jr., uJJ. I-Watt, njl.- Ukudlala umdlalo kuye kwaba ngokungakhathali ngakumbi kwezinye iimeko. Oko kusenokuba negalelo kwabanye ababukeli ukutshintsha ijelo.
Kodwa xa iyonke, i-NFL ijonge iminyaka emibini ethe tye ngenqanaba lokuphazamiseka.
'GIRLS' Recap Season 6 Premiere: Yonke Into Endakha Ndayifuna
'Isithembiso' Yindibaniselwano yeMfazwe, eyeMbali kunye nezothando
UMeghan Markle Uye Walwa Nemithetho Engqongqo Yasebukhosini Yeminyaka
Ngaba 'iAvengers: Endgame' ephezulu 'Avatar'? UQikelelo lweBhokisi-yeOfisi yethu yasekuqaleni.
indlela yokwenza imvelaphi yokujonga ngokwakho
ukujonga umva kweenombolo zefowuni
wasweleka njani u chester benningfield
umthetho nomyalelo svu umonakalo wesibambiso
ngesondo ngemali ecaleni kwam
olona nyani lwe testosterone lwendalo